Xubin Katirsanayd Guddiga Doorashadda kenya oo is Casishey Maanta – Radio Daljir
Xubin Katirsanayd Guddiga Doorashadda kenya oo is Casishey Maanta
Oktoobar 18, 2017 7:20 b 0
Jahwareer siyaasadeed ayaa kataagan Dalka Kenya,Masuul sare oo ka tirsan guddiga doorashada ee Kenya ayaa is casishay kadib markii shaki uu ka galay in dalku uu doorasho xalaal ah qaban karo toddobaadka soo socda taasi oo caqabada ku noqonaysa hanaanka doorashadii la qorsheynayay.
Roselyn Akombe ayaa sheegtay in guddigu ay ahaayeen lahaysteyaal siyaasadeed oo aysan waxba isku waafaqikarin ama qaadan karin wax go’aan ah,waxaana ay intaasi ku dartay in is casilaadeedi ay salka ku haysao arrimahaasi.
Dr Akombe oo ku sugan magaalada New York ayaa sheegtay in markii ay ku sugnayd Kenya ay xataa u baqday nafteeda ka dib markii ay hanjabaado badan la kulantay.
Raila Odinga oo ah madaxa xisbiga mucaaradka ah ee dalka Kenya ayaa toddobaadkii hore ka haray doorashadadii ku celiska ahayd isaga oo sheegay in uusan rumaysnayn in doorasho caddaalad ah ay dhici doonto.
Nabadoon Xaarin oo Wax laga Xumaado ku tilmaamay Qarixii Zoobe (dhegayso)
Puntland oo Dawooyin iyo Qalab u dirtay Muqdisho (Sawiro)